Fampirantiana sy famokarana Ice cream Ice Showcase QD-BB-12 China Nenwell
Fampirantiana Ice Cream amin'ny varotra fampisehoana QD-BB-12
Ity fampirantiana gilasy ara-barotra ity miaraka amina varavarana fitaratra mitafo mahitsy hampisehoana ny gelato na tsindrin-tsakafo anao eny amin'ny supermarket na any ivelany.
Ity fampisehoana mangatsiaka ity dia habe malaza amin'ny fisafidianana vata fampangatsiahana gilasy Nenwell. Ho an'ny dokam-barotra tsaratsara kokoa, ity maodely ity dia mety ho fanao amin'ny marika, sticker ary ny jiro LED ao anaty kabinetra aza mba hanatsarana ny sarin'ny orinasan-tserasera hahazoana varotra mandrisika bebe kokoa.
Amin'ny maha-tranga Ice Cream Display Cases azy dia tena revolisiona amin'ny teknolojia kabinetra gilasy izany. Izany no antony anoloran'i Nenwell fitaovana manokana, avo lenta, ampiarahana amin'ny fahatsiarovan-tena momba ny haitao ny teknolojia fitsitsiana angovo. Satria ny singa famolavolana tokana natokana ho an'ny toerana tsy manam-paharoa dia tsy nateraka tamin'ny famoronana ihany, i Nenwell dia niezaka hatrany nitondra ny parlieran'ny gilasy sy ny fivarotana mofomamy amin'ny ho avy amin'ny alàlan'ny fanomezana teknolojia fampangatsiahana miavaka. Ny kabinetra dia natao hanomezana fitambarana tsy manam-petra, ary koa mba hahazoana antoka ny fahitana mirindra ireo vokatra gilasy. Voafehitra ny vata fitaratra. Ny singa dia feno miaraka amin'ny evaporator roa sy ny fivoarana airflow roa ho an'ny fitoviana amin'ny mari-pana.
Ity vata fampangatsiahana gilasy ity dia mifangaro tsara amin'ny vokatry ny hatsiaka sy ny fampiroboroboana. Raha mila fanazavana fanampiny, dia mifandraisa aminay amin-katsaram-panahy.
Teo aloha: Fampirantiana mofomamy mofomamy misy fanala fanala
Manaraka: -20 ~ -40ºC Fampiorenana an-tsokosoko biomedika hafanana ambany indrindra
1. vera miolikolika avo roa heny miaraka amin'ny tariby fanafanana defogging.
2. Miaraka amin'ny compressor marika malaza, haingam-pandeha haingana sy famokarana avo.
3. Ny fanaraha-maso elektronika dia afaka manitsy ny hamafin'ny fotaka misy lanezy.
4. Fangatsiahana rivotra.
5. tabataba ambany.
6. Jiro LED ao anaty ho an'ny fahitana vokatra.
7. Mihoatra ny fiarovana ankehitriny sy ny fiarovana malefaka ambany.
8. Rafitra ivelany: plastika nohamafisin'ny fibre vera.
Karazana defrost Auto defrost
Fanamarinana CE, RoHs
Loko tsy voatery
ara-nofo Vy vy sy vera
Kitapo fitaterana Kitapo ho an'ny fonosana fanondranana
Karazana maripana Maripana tokana
asa Fangatahana mangatsiaka sy hatsiaka